DHEGEYSO-Maxaa dhexmaray madaxweyne Gaas iyo bulshada Burtinle. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Maxaa dhexmaray madaxweyne Gaas iyo bulshada Burtinle.
Luulyo 24, 2016 11:45 g 0
Burtinle, July 25 2016–Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo mudo saddex todobaad ah howlo shaqo u joogey magaalada Galkacyo oo uu ka sameeyey isbedelo kala duwan ayaa dib ugu soo laabtay shalay galab magaalada Garoowe.
Pro Gaas, madaxweynaha dowladda Puntland ayaa waxaa inta uusan soo gaarin Garoowe, waxa uu kulamo laqaatay maamulka iyo shacabka degmada Burtinle ee gobolka Nugaal, waxaana halkaas khudbad kajeediyey madaxweyne Gaas iyo qaar kamid ah shacabka degmada.
DHEGEYSO-Dowladda Puntland oo xayidhay deegaamo katirsan gobolka Sanaag.